Ka Windows Phone in macruufka Qalabka Demi Data
Haddii aad go'aan ku gaaray in uu u wareegayo sameeyaan Phone Windows u qalab macruufka ugu dambeeyey sida iPhone ah, aad u cad waxay u baahan doonaan in ay u guuraan dhammaan xogta aad ka mid yihiin xiriirada, sawiro iyo music ka Phone Windows si iPhone. Sida caadiga ah waxa ay inta badan waa mid aad u adag tahay in la sameeyo tan iyo dhammaan Casharrada aad ka heli online inta badan waa mid aad u dhib badan qofka caadiga ah si ay u isticmaalaan. Kuwa soo socda waa laba siyaabood oo kala duwan si ay u soo guuraan oo dhan ee aad Windows Phone Data in aad iPhone. Labada siyaabo waxay shaqayn doonaan inkastoo ay sidoo kale leeyihiin faa'iidada iyo khasaaraha ay u gaar ah.
Bal aynu eegno mid kasta si gaar ah si aad u go'aansato oo ka mid haboon baahidaada.
1. kaabta iyo Soo Celinta Si toos ah
2. ka Winphone beddelashada Data qalabka macruufka Isticmaalka fiilooyinka USB
3. Hal-Guji Phone in Phone Transfer la Mobiletrans
1. Dib-up iyo Soo Celinta habka
Waxaan u ah dib-up wac iyo soo celiyo hab sababta oo ah waxaad u baahan doontaa inaad dib u-up dhammaan xogta ku saabsan Windows Phone si aad u computer ka hor inta aadan soo dhoofsadaan kartaa iPhone.
Talaabada Koowaad: Abuuritaanka Back-up
Haddii aad qotomisay wax walba si sax ah, oo aad Windows Phone waa in si toos ah la beehsa adeegyada Microsoft Cloud. Haddii aad isku dayday howlan adeegyada Cloud oo aan shaqayn, waxa aad u baahan doontaa in aad si fudud u geliyaan dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka aad ka mid yihiin jadwalka, mail iyo xiriirada la isticmaalayo OneDrive ama ku kaydsan dhammaan xogta aad ee Windows Live xisaabta.
Taas waxaad ku samayn gashid aad Windows Live account iyada oo aad Windows Phone ka dibna riix saldhigyada. Waa in aad awoodid in aad waafajinta xogta ah ee aad taleefan si aad u Windows Live account ka page goobaha noqon.
Tallaabada Labaad: xogta nidaameed taageeray-up aad iPhone
Marka aad iPhone si sax ah firfircoonaan, u tag menu Settings ee telefoonka oo guji Mail, Xiriirada, Kalandarada ka dibna garaac Button Account ku dar. Waa in aad suuqa kala socda;
Markaas guji Outlook.com ka fursadaha siiyey, geli Windows Live macluumaad login iyo iPhone waa in si toos ah u hagaagsan oo xogta ilaa aad ku taageeray on Windows noolaan hore.
Maxaad habkan waa wanaagsan
Haddii aad hesho ee la soo dhaafay ka dib-up waa hab aad u sahlan oo si fudud u shaqaysaa tan iyo aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waa dhaqaajiso aad iPhone oo aad diyaar u tahay in ay tagaan. Waa hab fudud oo uu qof kasta samayn karaa oo sidoo kale ma qaadan doontaa waqti aad u dheer. Sidaa darteed waa habka ugu fiican ee kuwa raadinaya in ay beddelaan macluumaadka si ay iPhone ama qalab kale oo wax ka macruufka ah Windows Phone si fudud oo dhaqso.
The khasaaraha ee habkan
Sida ugu dhaqsaha badan waxa ay u muuqataa sida xal deg deg ah oo fudud, weli waxaad u baahan tahay in ay si fiican u beehsa ka Phone Windows la Windows Live. Haddii ay tani aan si sax ah samayn, waa macquul in la isticmaalo habkan in ay beddelaan aad xogta Phone Windows in qalab macruufka ah. Habkani oo dhan waxay ku xiran tahay Windows Phone aad xogta si sax ah ula Windows Live beehsa, haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, ma waxaad isticmaali kartaa habkan.
2. ka Windows Phone beddelashada Data qalabka macruufka Isticmaalka fiilooyinka USB
Isticmaalka fiilooyinka USB si ay u gudbiyaan files si aad qalab macruufka ah waa habka ugu badan ee la isticmaalo marka aad rabto in aad si fudud u samayn oo aadan rabin in gashato kasta si aad u computer. Halkan sida loo sameeyo si fudud;
• Isku aad Windows Phone in computer adiga oo isticmaalaya cable USB ah; your computer waa in lagu ogaado telefoonka sida adag-drive dibadda. Run ahaantii kombiyuutarada Inta badan muujin doonaa files telefoonka ee aad u.
• Raadi folder ka aad rabto in lagu wareejiyo files. Waxaan ku wareejin karaa oo kaliya music sidan isticmaalaya Lugood si folder aad rabto in lagu wareejiyo waa folder music ah.
• Markaas nuqul oo paste gal ama folder aad u computer
• Start Lugood, Waxa muhiim ah in aad guji Edit, ka dibna aad rabtid iyo Qalabka. Halkan, waxaad dooran doonaa "Ka hortag iPod, iPhone iyo iPad ka syncing si toos ah.
• Markaas dhaqaaqo aad iPhone ama qalab kale oo macruufka kasta oo furaysto galay your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Halkaa marka ay marayso Lugood si toos ah u bilaabi doonto. Haddii aan samayn, waxaa gacanta ku bilaaban.
• Lugood aqoonsan doonaa iPhone oo soo bandhigaan ee geeska kore ee midigta
• click on File markaas dar Galalka La Library on geeska bidix ee sare. Tani waxay ku dari doonaa music oo dhan si aad u maktabadda Lugood aad.
• Dooro "nidaameed Music ka songs soo xulay iyo playlists" Laga soo bilaabo halkan ka dooro dhammaan faylasha aad rabto in lagu wareejiyo oo guji "codso."
• Lugood markaas waafajinta doonaa oo dhan ee aad music in aad iPhone oo aad kala iibsiga noqon doonaa dhameystiran
Faa'iidooyinka ee habkan
First of dhan uma baahnid in aad aad u badan marka la eego software iyo hardware in ay isticmaalaan habkan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa cable USB ah, Lugood lagu rakibay on your computer iyo labada iPhone iyo Windows Phone. Waxaa muhiimad waa hab jaban ee files ka Windows wareejinta qalabka macruufka.
Habkani waa waqti badan ayey. Waxay qaadataa waqti dheer oo kaliya si aad u hesho in ay tallaabo kama dambaysta ah ee habkan. Waxa kale oo ay ku tiirsan tahay xaqiiqda ah in waa in aad haysataa Lugood lagu rakibay on your computer haddii aadan haysan Lugood on your computer si fudud ma shaqeynaayo. Tallaabooyinka aad u badan in aad maraan ka hor inta aanad illaa iyo heer ay faylasha aad si ammaan ah wareejiyo, waa mid aad u fudud in la isku buuqo oo seegi tallaabo. Marka ay tani dhacdo, habka ma shaqeyn doonto arrin iyo sidoo kale natiijada noqon doonta in faylasha aad gaari karaa qalab macruufka la nooc ka mid ah dhibaatada.
Qaabkan waxaa kaloo ma aha in ku haboon dad badan oo u badan sababtoo ah ma jiraan wax damaanad ah in faylasha aad heli doontaa oo ammaan uga tago. Waxaad sidoo kale yeelan doonaan tallaabooyin aad u badan tahay in la raaco iyo inta badan oo naga mid ah, waayo-aragnimo farsamada looga baahan yahay in la sameeyo oo dhan ah tan si sax ah waa ku filan. Sidoo kale habkan kaliya ee ay shaqeysaa marka aad rabto in lagu wareejiyo music iyo wax ma nooc kale ee xogta.
Waxaa muhiim ah in aad soo qaado hab ku haboon baahidaada gaarka ah. Labada hababka kor haysan khasaaraha ay, laakiin waxa ay sidoo kale jirta oo si sahlan si uu u dhameystiro. Dhinaca kale, kaliya aad u rakibi yaabaa software on your computer kaa caawin doona inaad files ka Windows Phone wareejiyo qalabka macruufka in hal click.
Mobiletrans awoodi karaa inuu wareejiyo videos, muusig iyo sawiro ka phone daaqadaha si macruufka si toos ah. Si kastaba ha ahaatee, Ogow in xiriir wareejinta u baahan doonaan si ay u soo celiyaan Mobiletrans ka Onedrive in phone bartilmaameedka. Tallaabooyinka soo socda ayaa hagitaan talaabo talaabo caawin way ku caawin doonaan.
Tallaabada 1. Waxaad tagtaa Wondershare Mobiletrans iyo aad u hesho furay.
Tallaabada 2. Next, guji "Phone in Phone Transfer" on interface ugu weyn ee Mobiletrans.
Tallaabada 3. Hubi in labada qalabka ku xiran yihiin your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Haddii il iyo caga telefoonada aan si sax ah kaalinta, guji "Flip" in ay si sax ah iyaga beddelaan.
Tallaabada 4. Si aad u dooratid faylasha doonayo si ay u gudbiyaan, calaamadee sanduuqa ka sokow noocyada faylka dooro files ee suuqa kala iibsiga. Haddii wareejinta xiriir la doonayo, Mobiletrans soo celin doonaa xiriirada ka Onedrive in mid ka mid click in telefoonka loo baahan yahay.
Tallaabada 5. Ugu dambeyn, bilowdo wareejinta adigoo gujinaya "Start Copy" halka telefoonada joogo xiran tan iyo bilowgii ilaa dhamaadkii habka.
> Resource > Windows > Free Siyaabaha Demi Data ka Windows Phone in macruufka Devices